BOLETUS LA AQOOSAN KARO OO CAANO LEH OO LEH SHARAXAAD IYO SAWIR - MUSHROOMS
Boletus ama wuu xanuunaa muddo dheer ayaa loo adeegsaday cuntada. Waxaa jira wax la cuni karo, xaalad ahaan la cuni karo iyo boqoshaada aan la dabooli karin. Qoyska boqoshaada waa mid ka mid ah noocyada ugu caansan ee wakiilada la cuni karo - miro cad. In maqaalka ah waxaan ka hadli doonaa sida ay u muuqato gacanta, sida loo kala saaro inta u dhaxaysa boqoshaada caano ah oo caano ah oo caano leh, nooca boleta yihiin.
Nooc nooca boletus wuxuu leeyahay xeryahooda sunta ah ee soodhaweynteeda, sidaa daraadeed dadka wax soo saarka ah ee khibradda leh way ogyihiin in laga mamnuuco in la cuno. Waxay dhadhanaysaa qadhaadh waxayna sababtaa murugo xummad, taas oo ka dhalatey xanuunka ba'an ee ku dhaca mindhicirada iyo beerka, runtii way kacsan tahay, qarqaryana way muuqdaan.
Koofiyadan quruxda badan leh waxay leedahay midabka saliidda gabbaldayaha aan loo baahneyn oo leh shimid yar oo ah cherry bislaado. Dhismaha maskaxda ee daboolka waxaa laga yaabaa in lagu daboolo wax yar yar, taas oo u egtahay mid wareegsan oo leh geeso istiraatiiji ah. Iyadoo da 'da', qadku wuxuu qaataa qaab kubad aan si siman lahayn ah, kaas oo uu leeyahay qallafsanaanta geesaha qaybta. Dhexdhexaadiyuhu wuxuu gaaraa 15 cm (xaalado dhif ah waxaa laga yaabaa in badan). Muuqaal aad u kala duwan oo ah guntada quruxda badan leh waa in aan la cunin qorrax iyo slugs, maaddaama ay markiiba u dhiman doonaan walxaha sunta ah.
Ma taqaanaa? Sannadihii 60aad ee qarnigii labaatanaad, dadka wax soo saarka ah waxay soo heleen xabo miisaankeedu yahay 10 kg.
Tuubooyinka Boletus waxay leeyihiin hoon-huruud ah, oo leh da'da fungus noqoto saytuun madow. Dhererka tuubadu waxay gaari kartaa 15 mm, marka la gooyo ama la cadaadiyo waxay buluug u noqotaa mid adag. Dareemaha dharka quruxda badan leh waa kuwo yaryar, wareegsan, casaan-gaaban oo casaan ah, oo leh da 'daamadu waxay noqotaa hurdi iftiin, kadibna cagaar. Marka la cadaadiyo, godadka waxay helayaan midab buluug ah. Gawaarida kudheerta faleebo, mid fudud iyo yar yar (cabbirka dhexdhexaad ah - mikrus 14x5).
Lugta dhoobo-qurux badan oo qaab-quruxsan oo qaab-quruxsan ayaa si tartiib tartiib ah u beddelaya midabka bilawga daboolka ilaa saldhiga fungus. Midabku wuxuu ku bilaabmaa midab liin ah, ka dibna wuxuu u jeexjeexaa carmine-cas, wuxuuna ku dhammeeyaa mid madow. Mushaharka Old boletus lumin karaan lugtooda guduudan madow. Saxarka ee fangaska waa cufan iyo firfircoon, kareem-midab. Ugu horreyntii, waxay dhadhamisaa macaan, ka dibna waxaa soo baxaya qadhaadh qadhaadh ah. Klyuchonozhkovy bolt ay ku badan tahay keynta qoyan ee xayawaanka ah, marmarka qaarkood - xakamaynta. Inta badan waxay ku dhacdaa kaymaha laga bilaabo dabayaaqada Luulyo ilaa bartamihii Oktoobar.
Waxaa muhiim ah in la ogaado in boletus iyo likaha boletus ay sidoo kale leeyihiin muuqaal la mid ah.
Nooc ka mid ah boletus wuxuu leeyahay magacyo badan oo kala duwan: qoto dheer, qallafsan, qallafsan, qallalan. Daboolka geela waxaa ka mid ah qaabdhismeed (qaababka dhalinyarada), dhexdhexaad ah 5-18 cm (marmar gaaro 25-28 cm ama ka badan). Maqaarku waa mid caajis ah, midabka lime ee carrada, mararka qaarkood wuxuu helaa muraayad lime oo macquul ah. Marka la tirtiro, furku wuxuu soo gashaa qiyaas buluug ah.
Tuubooyinka ayaa leh midab huruud ah. Noocyada ayaa ah goobo-qaabaysan, yar yar, waxay helayaan midab buluug ah oo leh xidhiidh adag. Cabbirka muranku waa isku mid sida tan of mushroom qurux badan. Dufcaddii xayawaanka ku rinjiyey midab dahabi ah. Lugta dhalatadu waxay u egtahay boodh, oo ka soo baxa gudaha, 5-10 cm oo sare iyo 3-6 cm dheer oo qaybta ah. Da'da, lugta waxay qaadataa qaab ah silsilad ku wanaagsan. Midabka lugaha ayaa ah mid furan, saldhigana waxaa laga arki karaa dhibco miro yar. Dusha sare ee stem wuxuu leeyahay mid aan ciriiri lahayn, taas oo, xiriir adag, wuxuu soo iibiyaa midab ah midabka jannada. Qashirku wuxuu aad u egyahay qaabdhismeedka saxanka qolofta, laakiin dhadhankiisu waa mid sabool ah (qadhaadh xoog badan ayaa ka horeysa).
Waa muhiim! Qalabka qaar ayaa saameyn kara hawsha beerka oo burburisa unugyada, sidaas darteed, calaamadaha ugu horreeya ee sumowga, waa inaad isla markiiba la xiriirtaa hay'ad caafimaad si laguu caawiyo.
Mushahaan marar dhif ah ayaa laga helay kaymaha Yurub iyo Waqooyiga Ameerika. Prefers si ay u koraan saldhiga dhuxusha ama bjørk. Waxaa laga heli karaa xagaaga iyo dayrta., inkasta oo ay inta badan sameyso mycorrhiza. Gawracan xajmiga ee sharaxaadu waxay la mid tahay shaydaanka xanuunkiisa, laakiin kan dambe wuxuu leeyahay ur aan fiicnayn oo ka hooseysa kan hoose. Buugaagta tixraaca qaarkood waxaad arki kartaa xogta ah in likahaan uu yahay mid la cuni karo. Dhab ahaantii ma hayo maaddooyinka sunta ah ee u nugul jidhka bini'aadamka, laakiin xidid qadhaadh ayaa dhadhan qadhaadh ahSidaa daraadeed, qofna uma isticmaalo cunto karinta.
Baro naftaada marinimada iyo qaababka boqoshaada goosashada xilliga jiilaalka
Nooc noocan oo kale ah ee dhididka ah ee dhismihiisa wuxuu leeyahay xeryaha sunta ah, marka lagu daro dhadhanka qadhaadhka ah ee jirka ah waxay keeni kartaa dhaawac aan loo baahnayn jirka. Waxaa loo magacaabay sharaf leh haweeney oo ahayd jimicsi-yaqaanka bilawgii qarnigii labaatanaad ee Faransiiska. Magaceedu wuxuu ahaa Marcel le Gal, laakiin suugaantii Ruushka ah ee buuggan badanaa loo yaqaan "boletus legit".
Saldhigga sare ee lugta ayaa barafoobay, ku dhowaad siman, casaan, marar badan oo casaan ah, midab. Qaab ka mid ah daboolka yaraanta jaleecadu wuxuu u eg yahay qaabka loo yaqaan 'elipsoid'. Waqti ka dib, kabadu waxa ay noqotaa mid yar oo wareegsan oo noqota barkin-qaabeeya. Dhexdhexaadiyuhu wuxuu ku xiran yahay da'da xabagta waxayna ku kala duwan yihiin 7 ilaa 17 cm ama in ka badan. Hilibka lugta leh wuxuu leeyahay hunug-huruud ah iyo ur aan fiicnayn. Meelaha la cuno slugs, waxaa lagu rinji midabka ah ee saytuun aad u bislaaday, caadiga ah ee ku dhowaad dhammaan boqoshaada of geneto ah.
Si aad naftaada uga ilaaliso sumowga aad u daran, waxaad barataa sida loo kala saaro agarro caadiga ah oo ka yimaada dawacooyinka been abuurka ah.
Dhismaha lugaha ayaa u eg silsilad casri ahtaas oo dhexdhexaadkeedu dhexdhexaad yahay kala duwanaanta 3 ilaa 5 cm (mararka qaarkood qiyaas ahaan 6-8 cm). Dhererka dhererka wuxuu ku xiran yahay da'da eukaryote waxayna gaari kartaa shan iyo toban mitir. Noocyada waxaa lagu rinjiyeeyaa midab khafiif ah, oo tuubooyin dhererkiisu yahay 1.5-2.2 cm Cabbirrada xayawaanka iyo midabada budada isboortiga waxay isku mid yihiin qaababka bayoolojiga ee wakiilka lagu sharaxay cutubka kore.
Borovik le Gal inta badan waxay ku dhacdaa Galbeedka Yurub. Goobta ciidda alkalin, waxay inta badan ku koraan hornbeam ama geedkii. Qoryaha waxaa laga heli karaa xagaaga ama xilliga dayrta. Le Hal, marka lagu daro dhadhanka qadhaadhka ah, wuxuu laftiisa iska leeyahay waxyaabo sumaysan, sidaas darteed in la cuno waa la mamnuucay.
Ma taqaanaa? Talyaaniga, waxaa loo tixgelin doonaa xadgudub sharci ah haddii adiga naftaada (ogolaansho la'aan) u tagto kaynta si aad u soo ururiso boqoshaada.
Noocan xanuunku wuxuu keeni karaa sunta cuntada, sidaas darteed loo aanaynayo boqoshaada sunta ah ee la gooyey. Astaamaha ugu horreeya ee sumowga waxaa ka mid ah: xanuunka caloosha, lallabbo, shuban, matag, qarqaryo. Astaamaha badanaaba way baaba'ayaan iyada oo aan wax laga qabanin wasiirrada daawada 24-36 saacadood. Kiisaska dhimashada ee xabsi qurux badan ayaan weli la diiwaan gelin.
Noockani wuxuu ka kooban yahay dhexroor ballaadhan oo waaweyn (waxaa jira qaybo leh dhexroorka ilaa 30 cm). Waxaa lagu rinjiyey casaan mugdi ah, marar dhif ah - bunni. Si ka duwan dhammaan noocyada kor ku xusan, xabkani wuxuu leeyahay dusha sare ee daboolka. Dabeecadaha saxarada ee caleenta waxyeelladu waxay la mid tahay kuwa kor lagu sharaxay.
Waxaan sidoo kale kugula talineynaa inaad ogaatid sida loo kala saaro dabaysha, jaantusyada, iyo boqoshaada boqoshaada aan la dabooli karin.
Length of Leg waa istaandarka, laakiin dhexdhexaadiyuhu wuxuu leeyahay tilmaamo cadaalad ah (ilaa 12 cm). Dhismaha lugaha waxay u egtahay muraayad isku dhejis ah oo ku yaala saldhigga, oo ku rinji midab madow. Dhererka tuubadu waxay gaartaa 1.7 cm, midabka wuxuu u egyahay isku dar ah liin iyo lime. Noocyada cadaadiska ku hela midab buluug ah, qaab dabiici ah ayaa leh midab khafiif ah. Calaamadaha xayawaanka kama duwana wakiillada kale ee caankan.
Inta badan, boletus waa quruxda quruxda leh ee leh qoryaha ama dhagax weyn. Inta badan waxaa laga helaa waqooyiga galbeed ee Maraykanka. Waxaa sidoo kale laga helay gobolka New Mexico. Waxaad ka heli kartaa boltkan keynta isku jira xagaaga dambe - dayrta hore.
Qaabka iyo dhexroorka daboolka ayaa ah isla sidii la mid ah kii hore ee wakiilka hore ee Borovik. Marka la qoyan yahay, furku wuxuu noqdaa mid xummad leh waxana uu helaa dheecaan. Mushahaan wuxuu leeyahay midab aan caadi ahayn, taas oo ka soo ifbaxaysa cawl caddaan ah ilaa cawska saytuunka. Waxay leedahay aag la midab ah casaan-cas iyo casaan. Marka la riixo fungus, dhibco madow ah ayaa la sameeyay. Marmarka qaarkood xajmiga casaan-guduudka ah ayaa waxyeello u geysan kara cayayaanka. Meelaha la waxyeeleeyay waxay leeyihiin hoon ama huruud ah.
Waa muhiim! Fiiro gaar ah oo la qaado: Musqulaha ayaa badanaa laga helaa meelo badan oo boletus ah.
Tilmaamaha lakabka tubada iyo godadka ayaa la mid ah sida xabagta quruxda badan leh, hase yeeshee, nabaradu waxay leeyihiin rinji midab leh (casaan-casaan ama midab casaan). Dhererka lugta ee cirku wuxuu gaaraa 15-17 cm, iyo dhexroorkeeduna waa 7 cm. Midabka lugta ayaa ah liin-cagaar leh shimaar casaan-casaan yar. Ugu danbeyntii waxay leedahay mesh burgundy nal, cadaadis ah waxay ku qaadataa buluug buluug ah.
Jidhka wakiilkan waa cufan, wuxuu leeyahay urta jilicsan, jilicsan-jaale ah. Meeshii loo gooyay waxay noqotaa mid buluug ah, ka dib marka uu midabkiisu noqdo midab kala duwan. Boletus pink-purple wuxuu leeyahay hilib macaan iyo dabeecado dhadhan fiican leh, si kastaba ha ahaatee, laguma talinayo in la isticmaalo qashin ama la kariyey, maadaama uu yahay wakiil sun ah ee bolets.
Boqoshaada la cuni karo waxaa ka mid ah: casaanka, likaha, svinushka, boletus, boqoshaada qoyska syroezhkov, boletus iyo agaric
Waxaa jira boqoshaada casaan-casaanka ah ee xayawaanka cagaarka ah ee kaymaha boodhka ah, inta badan inta badan meelaha ku yaalla buuraha. Prefers si ay u koraan geedo geedo iyo geedo. Cudurkan wax yar laguma darsamin by mykologists, sidaas darteed laguma talinayo in ay soo ururiyaan. Intaa waxaa dheer, waa arrin naadir ah in la kulmaan dadka wax soo iibsada. Waxa ugu ballaadhan loo qaybiyey Western Ukraine, Ruushka, iyo qaar ka mid ah wadamada yurub.
Nooc noocan oo kale ah wuxuu u egyahay mid la mid ah casaan-guduud. Daboolka, ka duwan sida fangaska kor lagu sharaxay, wuxuu leeyahay maqaarka wax yar oo jilicsan. Mararka qaarkood waxaa lagu daboolay nooc ka mid ah wax dhegaysiga leh, wuxuu leeyahay huurada shukulaatada-cawliga ah, geesaha ayaa lagu rinjiyeeyay midabka burgundy. Lugta dhejinta jilicsan ee jilicsan waa mid aad u egyahay qaabka iyo midabka lugta ee wakiilka kor ku xusan, farqiga kaliya ayaa ah in uu gaari karo dherer 20-22 cm Qashirku wuxuu leeyahay dhadhan qafiif ah oo ur ah.
Ma taqaanaa? Sawirada ugu horreeya ee boqoshaada ayaa u muuqday sidii 1450 sano ka hor dhalashada Masiixa. Sawirada waxaa laga heley cilmi-baaris dhaqameedyada dhulka Masar.
Tuubooyinku waxay matalayaan matxafyada waayeelka ah waxay helayaan midab madow (cagaaran, marar badan - midab-buluug). Cuntadani waxay la mid tahay miisaanka shaydaanka, oo laga helo meelo isku mid ah, waxay ku koraan xaalado isku mid ah. Si kastaba ha noqotee, wakiilka midabka maqaarka ee caankani waxaa laga helaa mid aad u dhif ah oo ka yimaada soo qaadashada musqusha, sidaa daraadeed, cilmi-nafsi yaqaanka uma fiicnayn. Kalluumeysatada khibraduhu ma soo ururiyaan nooca xabuubka, maadaama ay ku jiraan xeryaha sunta ah. Dad aan la aqoon ayaa cunay caleemaha pink, taas oo keentay astaamo aan sinnayn ah oo ku saabsan sunta cuntada 2-3 saacadood. Waxaa jira qarqaryo, xanuunka caloosha iyo beerka, lallabbo, matag, shuban, iwm. Hase yeeshee, xaaladaha halista ah ee sunta leh maqaarka casaan-iyo-guduud ayaan weli la diiwaangelinin, si kastaba ha ahaatee, haddii aad cunayso liko badan oo noocan ah, markaa gariirku wuxuu bilaabi karaa, taas oo horseedi karta miyir beel. Waxaa intaa dheer, suurtagal maaha in la isticmaalo wakiilka casaan-xayawaanka ah xitaa qaabka la kariyey (ka dib saacado dheer oo daaweyn kuleyl ah, walxaha sunta ah ma burburin karo qaab-dhismeedkooda).
Qaab dhismeedka geedka caleenta ah wuxuu leeyahay qaabdhismeed heer caadi ah, kaas oo ka tirsan dhamaan xubnaha jimicsiga Borovik. Dhererka cabbirka wuxuu ku kala duwanaan karaa 5 illaa 20 cm, iyadoo ku xiran da'da fungus. Midabkeedu wuxuu kala duwan yahay, inta badan waxay ku xiran tahay da'da wakiilka iyo walxaha macdanta ee ku jira ciidda (casaan, casaan-casaan, casaan (daasad yar), burgundy). Sifooyinka nafleyda waxay soo jeedinayaan in xubnaha dhalinyarada ah ee noocyada Hoorka ay leeyihiin midab khafiif ah oo maqaarka ah (badanaaba qaxwaha, cawlo cad). Iyada oo da'da, fangasku waxay gashaa sariiro adag oo madow ama midab madow ama madow-madow, maqaarku wuxuu gebi ahaanba dhali doonaa (iyada oo aan lahayn patina).
Lugta caleemaha ah ee cufan ee qaabka caadiga ah (silylless silylinder girder wuxuu ku dhowaad ku fiican yahay da'da). Dhererka lugta, oo ka duwan xubnaha kale ee caanaha, waa yar yar, gaaraya 6-8 cm, dhexroorka - 3-6 cm. Midabku waa midabka canab jaalaha ah oo leh meel cagaaran oo casaan ah. Tilmaamaha tubaakada iyo fooriintu waa heer, laakiin waxaa jira farqi u dhexeeya size (tubooyinka yar yar, si kastaba ha ahaatee waxay kordhiyaan da'da). Sida cirbadaha kale ee cirfiidkan, marka lagu cadaadiyo, fangaska waxay soo iibsadaan midabka canabkiisa buluug ee bislaaday. Sumada fangasku ma laha wax caddaynaya ama dhadhan. Inta badan, wolfbears waxaa laga helaa kaymaha adkaa ee reer binu Israa'iil (laga bilaabo Nofeembar ilaa dhamaadka Diseembar). Wuxuu ku koraa kooxo ku yaal waddanka la cayimay waa mid caadi ah. Waxay tilmaamaysaa boqoshaada dhexdhexaad ah la cuni karo. Cunto ka dib daaweyn kuleyl ah oo aad u fiican (kariyo ugu yaraan 15 daqiiqo heerkul ah 100 ° C, maraqana ma baaba'a maadaama ay jiraan walxo sun ah oo lagu kala diro).
Waa muhiim! Waxaa jira qiyaastii 300 nooc oo borovik ah, markaa ka hor intaanad raacin kaynta, waxaad u baahan tahay inaad si taxadar leh u barto xogta suugaaneed si aan u ururin wakiilada aan la garanayn ee cirfiska.
Ka dib markaad akhriso maqaalkan, waxay u caddeyn doontaa qaar badan oo ah boletus, noocyada iyaga ka mid ah, iyo kuwa iyaga la cuni karo. Tani waa macluumaad aad u muhiim ah in qof walba oo soo iibsada uu barto si uu u waxyeelleeyo caafimaadkiisa iyadoo la cunayo boqoshaada aan la dabooli karin.